Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Cambodia Breaking News » Sidee dib loogu soo booqdo Cambodia?
Jebinta Wararka Caalamka • Cambodia Breaking News • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Dunidu waxay si tartiib tartiib ah u furaysaa goobaha dalxiiska ee dhammaan qaybaha adduunka. Dib u furista waxaa loogu talagalay booqdayaasha si buuxda u talaalan. Cambodia waa waddankii ugu dambeeyay ee sidaan oo kale ugu dhawaaqa Axadda.
Wasaaradda Caafimaadka ee Kamboodiya Noofambar 14, 2021, ayaa hadda soo saartay war-saxaafadeed rasmi ah oo ay ku xaqiijinayso in aanay jirin wax shuruud ah oo karantiil ah oo loogu talagalay socotada si buuxda u tallaalan.
War saxaafadeedka wasaaradda caafimaadka ayaa intaas ku dartay in inkastoo aysan jirin wax shuruud ah oo tallaalka ah, haddana ay waajib tahay in muunado laga qaado dadka safarka ah ee imaanaya iyadoo la isticmaalayo qalab baaritaan degdeg ah.
War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu caddeeyay, in kuwa aan la tallaalin, loo baahan yahay 14 maalmood oo karantiil iyo muunad PCR ah, iyada oo aan wax shuruudo gaar ah loo saarin kuwa horay loo tallaalay.
Wasaaradda caafimaadka ayaa soo saartay war-saxaafadeedka ka dib go'aankii PM Hun Sen oo fariin cod ah u soo diraya si loo soo afjaro shuruudaha karantiil ee Cambodia ee socdaalka, si buuxda loo tallaalay.
Wasaaradda caafimaadka ayaa intaa ku dartay in rakaabka si buuxda loo tallaalay oo hadda ku jira karantiilka xarumaha karantiilka, hoteelada, iyo guryaha dalka oo dhan ee aan laga helin COVID-19 loo ogolaan doono inay karantiil ka baxaan laga bilaabo 15-ka November 2021 ka dib. .
Turjumaada aan rasmiga ahayn ee shuruudaha cusub waa hoos:
Oggolaanshaha rakaabka si buuxda looga tallaalay COVID-19 inay galaan Cambodia iyaga oo aan u baahnayn karantiil
1. Rakaabka si buuxda looga tallaalay COVID-19 oo Cambodia ku yimid hawada, badda, iyo dhulka waa inay keenaan:
- Shahaadada Talaalka, oo xaqiijinaysa tallaalka COVID-19, qiyaas buuxa oo aasaasi ah iyo shahaado.
- Tijaabo COVID-19 (PCR) oo shaqaynaysa 72 saacadood oo la helay ka hor imaanshaha Cambodia, oo ay aqoonsatay maamulka caafimaadka ee waddanka ay khusayso.
Markay yimaadaan Cambodia, rakaabku waa inay tijaabiyaan degdeg ah (Tijaabada degdega ah) COVID-19 ee meesha laga soo galo dalka oo ay sugaan natiijada 15 ilaa 20 daqiiqo.
Kadib markuu helo natiijada baaritaanka COVID-19 ee xun, qofku wuxuu awood u leeyahay inuu si xor ah ugu safro Cambodia oo dhan, iyada oo aan loo eegin gobol ama gobol, loomana baahna in la karantiilo
2. Rakaabka aan laga tallaalin COVID-19 ee u safraya Cambodia, waxaa looga baahan yahay inay ku gudbaan tijaabada COVID-19 mashiinka PCR oo ay maraan nidaam karantiil ah oo 14 maalmood ah iyadoo la raacayo nidaamka dhaqangalka ah.
3. Rakaabka si buuxda looga tallaalay COVID-19 oo hadda tallaalka ka socda dhammaan xarumaha tallaalka, hoteellada iyo guryaha dalka oo dhan oo aan laga helin COVID-19 waxaa loo oggolaan doonaa inay karantiil ka baxaan laga bilaabo Noofambar 15. 2021 wixii ka dambeeya.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Dalxiiska Cambodia.